Xog ku saabsan Maamulka Gobolka Banaadir -
Muqdisho, Soomaaliya. – Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta kala diray shaqaale ka shaqeynayey xafiisyada dowladda hoose ee Xamar.
ENG Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow warqad uu ku saxiixan yahay ayaa la sheegay in Shaqada looga eryey shaqaale gaaraya 75 ka mid ahaa shaqaalihii ka shaqeynayey Xafiisyada Maamulka Gobolka Banaadir oo la shaqaaleeyey xiligii uu xilka hayey gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka banaadir Taabid Cabdi Maxamed.
Qaar ka mid ah Shaqaalahaas oo la Soo xiriiray xafiiska war qabadka Tusmo Times ayaa sheegay in markii ay soo xaadireen shaqada lagu wargaliyey in shaqada laga ruqseeyey sababo aan la sheegin.
Dhinaca kale xog aan ka helnay shaqaalahaas ayaa sheegaysa in lagu howlan yahay in Gudoomiyaha Degmooyinka Gobolka Banaadir in yar mooyee inta badan xilalka laga qaadi doono inta lagu gudajiro bishan February sida aan xogta ku helnay.
Related Items:Featured, Xog ku saabsan Maamulka Gobolka Banaadir